About Us - Shandong Honglu culus Industry Co., Ltd
Shandong honglu warshadaha co culus., LTD., Xulufo la ah kooxda Shandong Tang, koox wada., LTD., La aasaasay 1956, shaqaalaha shirkadda saddex kun oo qof, koox cilmi-baarista iyo horumarka farsamo ee saddex boqol ka badan oo qof, ayaa ku hormartay khadadka-soo-saarka , daahan workshop, workshop alxanka, workshop jediyay, uu leeyahay waayo aragnimo hodan ku ah wax soo saarka, cilmi-baarista iyo horumarinta.
cilmi our shirkadda iyo horumarka warshadaha culus waa wax soo saarka ugu horeysa gudaha shirkadda mishiino injineernimada qarax-caddeynta macdanta, oo dhan oo ka mid ah shirkada iyo technology cilmi madax banaan iyo horumarinta, xuquuqda hantida aqooneed ee madax bannaan, waa macdanta ugu weyn rubber_tyred gaadiidka xubin urur, waa ansixiyey ururka ee shirkadaha benchmarking warshadaha.
Aasaasay bilowga AnBiao ee ku hawlan soo saarka shahaado, shahaado isreebreebka, alaabta oo dhan ayaa xarunta ammaanka qaranka hubinta farsamo adag, waa shirkadaha gudaha horrayn heli shahaado qarax-caddeynta anigaa iska leh. Iyada oo xarunta qaranka kormeerka ammaanka iyo dib u eegis ee xafiiska goobta wadajirka ah kormeerka ammaanka, iyada oo shirkad go'an dhamaystiran oo xog farsamo, qalab kala duwan, awoodda wax soo saarka, iyo in ka badan 100 software iyo alaabta shirkadda hardware.The ee hubkaas ayaa loo isticmaalaa in anigaa iska leh dhuxusha, ore phosphate , iron ore oo laga qodo dahabka. The gaariga iyo qaybo, nidaamyada iyo mashaariic kale ayaa loo dhigay shahaadada patent qaranka.
Sida shuruudaha ammaanka qaranka ee anigaa iska leh dhuxusha iyo anigaa ah, anigaa ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan sare in looga baahan yahay qalabka gaadiidka, wax soo saarka shirkadda qarax-caddeynta iyo qalabka gaadiidka Fariin qoyan our waafaqaan shuruudaha ammaanka anigaa iska leh qaranka, waa a wax soo saarka ee doorashada koox badan oo waaweyn. Shirkadda wuxuu ku salaysan yahay guriga iyo tagaa dunida. Ka dib markii istaraatijiyad horumarinta dhaqaalaha ee dalka, dhinaca sahayda u habaynta si tartiib tartiib ah dhamaystiran iyo warshadaha tamarta cusub, suuqa macdanta guriga deggan, sii wadaan in ay horumariyaan waxyaabaha tamar cusub si loo hagaajiyo wacyiga wax soo saarka iyo iibinta. Si firfircoon qaabka bartamaha Asia, suuqa shisheeye Asia koonfur. Oo Russia, Myanmar, ee Filibiin iyo dalal kale oo ku adkeeyey xiriirka ganacsi.
Shandong honglu warshadaha co culus., LTD.Located in r injineernimada macdanta & d iyo soo saaridda of mishiino iyo qaybo, u hoggaansanaayeen ah "mas'uuliyadda, hal-abuurnimo, lagu kalsoonaan karo" Fikradda ah horumar, hogaansamo horumarinta "si ay u sameeyaan u wanaagsan oo xoog, dheer ku samayn" siyaasadda, waxaa ka go'an in ay noqdaan fasalka-koowaad qoyska, caalamka shirkadaha mishiino injineernimada caan ah.
Cinwaanka: no . 1 wadada meishan, zibo zone horumarinta dhaqaalaha, magaalada zibo, gobolka Shandong.